सदरमुकामको बत्ति हेरेर रात बिताउँछन् उखाडीका दलित हलिया « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » अन्य » सदरमुकामको बत्ति हेरेर रात बिताउँछन् उखाडीका दलित हलिया
सदरमुकामको बत्ति हेरेर रात बिताउँछन् उखाडीका दलित हलिया
२०७४ साउन २६, जागरण मिडिया सेन्टर
भिरालो जमिन माथि पुरै चट्टान । तल बाहुली गाड । बिचमा सदरमुकाम मार्तडी । नजिकैको एक दलित हलिया बस्ती । हेर्दा सुविधा सम्पन्न ठाउँ जस्तै देखिन्छ । तर, यो समुदायको पीडा सही नसक्नु छ । बडिमालिका नपा-९, उखाडीको यो बस्तीमा जम्मा १० परिवार बस्छन् । कसैसँग पनि एक महिना खान पुग्ने जग्गा जमिन छैन । घरका नाममा घर मात्रै ! सुरक्षित छैन । गाउँ बस्तीलाई सजिलो बनाउन नजिकैबाट सडक खनियो । दलित हलियाको उठीबास माध्याम यही सडक बन्यो । घरको माथिबाट जथाभावी डोजर प्रयोग गरी सडक खन्ने काम भयो त्यसै सडक खनेको ढुङ्गा माटोले पूरै बस्ती विस्थापित भयो । बस्ती भन्दा केही पर चार ओटा पाल टाँगेर १० परिवारले बासस्थान त बनाए । न खाने पानी छ, न बिजुली, अन्य सेवा सुविधा त सपनामा वर्षौँदेखि सजिएका मात्रै छन् । रात्रीको समय मुसलधारे पानी परिरहेको हुन्छ । माथि सडकबाट ढुङ्गा खसेको आवज आउँछ । यहाँका नागरिक बाँच्ने आशा मार्छन् । ‘एक मनले त सोच्यौँ अब मर्नुको विकल्प छैन भनेर तर सानासाना लालाबाला, बुढाबुढी सबै बोकेर भाग्न सफल भयौँ ।’-आँखामा टिलपिल आँसुका थोपा र त्यस दिनको पीडा सम्झदै माता लुहारले बताइन् ।
दिउँसो नेपाल रेडक्रस सोसाईटीमा पाल पाइन्छ भन्ने थाहा पायौँ र सदरमुकाममा रहेको रेडक्रसमा गयौँ र भन्यौँ । यहाँ पाल छैन भनेर पठाए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गयौँ । त्यहाँ पनि केही नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी देबेन्द्र लामीछानेले बताउनुभयो । तर, वहाँले जिल्लामा रहेका सङ्घसंस्थाहरूलाई भनिदिनुभयो । गिफ्ट बाजुरा नामक गैरसरकारी संस्थाले नौ ओटा पालको व्यवस्था गरिदियो । अहिले तिनै पालमुनी बसेका छौँ । पाल हालेर बस्ने ठाउँ पनि सुरक्षित छैन । डाँडामा भएकोले धैरैका पालहरू हावाले उडाएर च्यातचुत भइसके । चार ओटा मात्र बचेका छन् । त्यसै पाल मुनी १० ओटै परिवार बस्दैआएका छौँ ।’-माता लुहारले बताइन् ।
पालमा कुनै बार लगाइएको छैन । चारैतिर बाट खुल्ला छ । त्यसै भित्र गर्भवती महिलादेखि सुत्केरी, सानासाना बालबच्चा, बुढाबुढी पनि बस्छन् । रातदिन पर्ने झरीमा खुला ठाउँ । बालबालिका र बुढाबुढी लाई झाडापखाला निमोनीयाले सताउन थालेको स्थानीय बताउँछन् । दिउँसो पालमा बुढाबुढी र बालबालिका मात्र हुन्छन् । घरका ठुला मान्छे सबै मजदुरी गर्न सदरमुकाम मार्तडी तथा अन्यत्र कामका लागि जान्छन् । ‘साँझ पार्न थालेपछि सबै जम्मा हुन्छौँ । एकमेल्या सुत्छौँ ।’-कक्षा १० मा अध्यानरत गगान लुहारले भने । सुतेर निदाउन नपाउँदैमा माथिबाट पहिरो आउन सुरु भइहाल्ने उनले बताए । त्यसपछि सबैजना मिलेर सदरमुकाम मार्तडीको बिजुली बत्ति हेरेर रात बिताउने गरेको उनको भनाइ छ । हरेक वर्ष वर्षयाम सुरु भएपछि यो समुदायका मानिस राति राम्रोसँग नसुतेको वर्षौँ भइसकेको स्थानीय बताउँछन् । ‘पेटभरी खान त छोड्यौँ । राति सुत्न पनि नपाइने भएपछि सारै चिन्ता व्यक्त गर्छन् जोगी लुहार । ‘गएको वर्षघर भत्कियो र राहतको लागि रेडक्रस, प्रशासनलगायतका ठाउँमा गएपनि राहात पाइएन । राहत पाउन त मान्छे मर्नु पर्छ भने ।’-माता लुहारले गुनासो गरिन् । ‘ज्यान बचाउन यात्रो लागालाग मरेको राहातले क्या गर्नु सर ?’-उनले उल्टै प्रश्न गरिन् ।
‘जिल्लामा हलियाका नाममा करोडौँ रकम आउँछ । यो समुदायको लागि सहयोग गर्न कोही अघि सरेनन् । आफूहरूले आफू हलिया भएको र हलिया परिचय पत्र पाउँ भन्दै यो भन्दा पहिलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धनप्रसाद शर्मा पौडेल, भोजराज श्रेष्ठसँग अनुरोध गर्‍यौँ । भैहाल्छ भन्ने उत्तर पायौँ । तर, अहिलेसम्म परिचय पत्र पाएनौँ -उनीहरूले भने ।
By जागरण मिडिया सेन्टर in अन्य on August 10, 2017 .
← दलितप्रतिको मनोविज्ञान	बोल्न नसक्ने दलित जोडीको विचल्ली, मन्दिरमा आश्रित →